I-Ministries ye-Intanethi-CB Ukhohlwe ukungena
CB Ukhohlwe ukungena
Ulahlekelwe igama lakho lomsebenzisi okanye iphasiwedi yakho?
Igama lomsebenzisi elilahlekileyo
Ukuba u lahleka lakho igama lomsebenzisi, nceda faka idilesi yakho ye-imeyile, kwaye nqakraza iqhosha lokuthumela igama lomsebenzisi, kwaye igama lakho lomsebenzisi liya kuthunyelwa kwidilesi yakho ye-imeyile.
Ukuba u libala zombini igama lomsebenzisi kunye nephasiwedi yakho, nceda usebenzise igama lomsebenzisi kuqala, kwaye iphasiwedi. Ukubuyisela igama lakho lomsebenzisi, nceda faka idilesi yakho ye-imeyile, ushiye igama lomsebenzisi igama elingenanto, uze uklibhoze iqhosha lokuthumela igama lomsebenzisi, kwaye igama lakho lomsebenzisi liya kuthunyelwa kwidilesi yakho ye-imeyile. Ukususela apho ungasebenzisa le fomu efanayo ukufumana iphasiwedi yakho.
Ukuba u lahleka iphasiwedi kodwa wazi igama lakho lomsebenzisi, nceda faka igama lakho lomsebenzisi kunye ne-imeyile yakho Idilesi, cinezela inkinobho yokuthumela iphasiwedi kwaye uza kufumana iphasiwedi entsha ngokukhawuleza. Sebenzisa le phaswedi entsha ukufikelela kwisiza.